“Haybsooca damqashada uu leeyahay waxaad nala dareemi lahayd adiga oo saacada magaca nala wadaaga” |
“Haybsooca damqashada uu leeyahay waxaad nala dareemi lahayd adiga oo saacada magaca nala wadaaga”
Beelaha la hayb sooco in aanan gabdhahooda la guursan, iyo in aan loo oggollaan guurka beelaha kale kuma koobna faquuqa haysta.
Waxa ay ka xirxiran yihiin dhexgalka iyo la macaamilka bulshada ay la nool yihiin iyagoo ka warwarqaba inay maqlaan erayo niyadda kasii jabiya.
Taas ayaa loo aanaynayaa sababta ay nolosha beelaha la hayb soocaa loogu tilmaami karo mid ka hoosaysa Soomaalida kale.
Jaamac Khadar Gaws waxaa uu guddoomiye ka ahaa toban sannadood qaybta ay beeshiisa oo kuwa la haybsooco ahi kaga nooshahay magaalada Hargeysa.
Weriyaha BBC ee magaalada Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad ayuu uga warramay dhacdooyin xanuun badan oo lagu faquuqay dhalinyaro beeshiisa ah oo guursaday gabdho beelaha kale kasoo jeeda oo ay is jeclaadeen.
“Annaga haybsooca dhibaatadeeda waa mid noolasheenna aad ugu gidaarsan waana mid cad oo iska muuqata dee waxaa dareemi lahaa adigoo bal saacado magacan nala yara wadaaga oo aad nagala soo jeeddid reerkan bal ereygaasi damqashaduu leeyahay ayaad nala dareemi lahayd heeb soocu ama ereygan midgaanyahow marka nala yirahdo oo kale daqiiqado adoo reerkeyga yara matala ama ka soo jeeda ayaad noo dareemi lahayd”.
“Anigu marka aan xafadaha iyo meelahan dhex jooga waxaan ahay qof firfircoon laakiin markaan melahaa kale aanu tagno waxaan nahay dad aan ka dhex muuqan umadda kaloo dee sida iyada oo ay wajiga nagaga cambaareysan tahay kolba midgaanimaa nalagu riixayaa dad ka takooran baanahay umadda oo waanan kaftami karin, war noo yara kaadi adiga midgaan baad tahay inteyda kale an haasowne” ayuu yiri.
“Guurkana waa nalagu takooraa anigan kula hadlaya gabar baan qabaa magaalada Hargeysa ayuu aabbaheed deggan yahay dadka iskama naqanno ubadna wey ii leedahay aniga reerkeyga iyo ubadkeygiba gacanta ayaan ku haystaa laakin dad waxaa jira ubadkooda meel allaali meel ay u maraanba la’ dadna si cad baa looga qaatay ubadkoodi oo wax looga qabtay ma jirto”.
“Dhibaatada i haysata waxay tahay mar haddaan ehelka xaakeyga ee xididka ii ahaan oo aanan is aqoon, walaaldeed aan dadka iska garaneyn mar haddaad xididki dhamaa ee aad gabarta ka qabtay dadka aadan ka aqoon, xaasku ehelkeeda taleefan bey kala xidhiidha markay u tageysana keligeed beey u tagtaa oo ubadkeyda ma ka xeysa” ayuu yiri.
“baarlamaanka Somaliland wax qorsha cad ah oo u dejisan ama uu soo saaray oo Haybsooca lagaga hortagi karo ama maxkamadda sharciga ay ku dhaqmeysaayi ma jirto tan ugu daran weeyoo oo Soomaali la’aan xeer ay noo dajisay iyo sharci lna difaacay ma jiro dhaqaalahannaga ee liitana sida oo kale qayb ayey ka tahay xataa xaafadaha aan ku nool nahay noolal ahaan iyo horumar ahaanba wey ka hooseeyaan xaafadaha kale” ayuu yiri Jaamac Khadar Gaws oo BBC u warramay.
Wareysiga oo xanuun badan halkan hoose ka dhageyso.
Gabooyaha maxaa loo guursan waayey?
Maanta Maryan waxa ay ku nooshahay London, waxa ay aaminsan tahay in ay tahay waqtigii dadkeeda ay u istaagi lahaayeen caddaalad darada ay wajaheen.
Taasna waxa xilli dambe ku tahay jiilka maanta jooga.